Hopitaly Joesph Ravoahangy Andrianavalona :: Mitombo isa ny razana tsy misy maka ao amin’ny tranom-paty • AoRaha
Hopitaly Joesph Ravoahangy Andrianavalona Mitombo isa ny razana tsy misy maka ao amin’ny tranom-paty
Mihamaro ireo razana tsy misy maka ao amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), amin’izao fotoana izao. Saika ireo olona maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana sy voatifitry ny mpitandro filaminana ary ireo maty an-dalana tsy manana fonenana raikitra, izay hitan’ny fokonolona, no tena tafajanona ela ao amin’io toerana fitehirizana razana io.
« Misy karazany roa ny razana miditra ao amin’ny tranom-patin’ny hopitaly. Ny voalohany dia fatin’olona notsaboina tato amin’ny hopitaly. Avy any ivelany kosa ny faharoa, izay tsy voatery ho fantatra ny nahafaty azy. Antony maro no mahatonga ny olona tsy maka ny razana, ohatra mety voatifitry ny mpitandro filaminana ilay olona dia tsy te hipoitra ny havany sao hadihadiana. Ireo hoentin’ny eo anivon’ny Birao misahana ny fahadiovana (BMH) sy ny mpitandro ny filaminana no tena betsaka tsy misy maka », hoy ny profesora Rakototiana Auberlin, lehiben’ny sampandraharaha misahana ny fizahana ny razana ao amin’ny Hjra.
Raha ny lalàna manan-kery dia roa volana ihany no afaka hitehirizana ny razana ao amin’ny tranom-paty. Tsy maintsy alevina any amin’ny fasana iraisana etsy Anjanahary kosa rehefa dila io fe-potoana io. Razana roa no efa nijanonana ela ao amin’ity tranom-paty ity amin’izao fotoana izao. Isan’izany ilay tovolahy maty tamin’ny 26 jona lasa teo, tetsy Mahamasina sy teratany Nizeriana iray, izay naterin’ny havany tamin’ny voalohan’ny volana jolay 2019 ka tsy nalain’ireto farany intsony.
« Tsy misy afa-tsy roapolo ny efitrefitra fametrahana ny razana. Miisa folo isan’andro anefa ireo razana avy any ivelany miditra eto amin’ny tranom-paty, ankoatra ireo maty notsaboina teto amin’ny hopitaly. Ny efitra iray no atao mahazaka razana miisa roa », araka ny fanampim-panazavana.
Mandefa fampilazana amin’ny haino aman-jerim-panjakana kosa ny hopitaly alohan’ny handevenana ny razana any amin’ny fasana iraisana, izay hiandraiketan’ny BMH.
Fanadinan’ny sekoly tsy miankina :: Ambany ny taham-pahafahana tamin’ny CEPE katolika